यसरी भयो पर्वतका जिसीको पोर्चुगलमा हत्या - TV Annapurna
पोर्चुगलमा एक नेपालीकाे छुरा प्रहार गरि हत्या गरिएको छ । राजधानी लिस्वाेनमा मंगलबार राती पर्वत जिल्लाको मल्लाज घर भएका
हरि बहादुर जिसीकाे हत्या भएकाे हाे ।
उनलाई धादिङ घर भएका अर्जुन सापकोटाले हत्या गरेको स्थानीय प्रहरीले जनाएकाे छ । छुरा प्रहारबाट जिसीका भार्इ अाेम जिसी पनि गम्भिर घाइते भएका छन् ।
कसरी भयो जिसीको हत्या ?
पोर्चुगलको राजधानी लिस्वनको क्याम्पो पिकनो नजिक रहेको चाईनिज रेष्टुरेण्टमा मृतक जिसीका भाई ओम जिसी कार्यरत थिए । झण्डै आधा दर्जन नेपालीले काम गर्ने उक्त रेष्टुरेण्टमा हत्यारा भनिएका अर्जुन सापकोटाले भाडा माझ्ने काम गदैं आएका थिए । साहुले काम मन नपरेको भनेर निकालिएको भनिएपनि सापकोटा ३ दिनअघि मृतक जिसीका भाई ओमसँगको बिवादका कारण कामबाट निकालिएका थिए । सोही कारण प्रतिसोध साध्ने नियतले मृतकका भाईलाई आक्रमण गर्ने नियतले पुगेका सापकोटाले सगै रहेका दाजुभाईमाथी नै अन्धधुन्ध धारिलो हतियार प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन ।
मृतक हरि बहादुर जिसी को हुन ?
पर्वत साविक मल्लाज गाविसका हरि बहादुर जिसी ५ बर्षअघि पोर्चुगल गएका हुन । नेपालमा कानुन बिषयमा स्नातक गरेका जिसी आर्थिक समस्याका कारण केहि समय वेल्जियम बसेर उनि पोर्चुगल गएका थिए ।
पोर्चुगलमै बसेर त्यहीको स्थाई बसोबासको अनुमतिपछि अहिले श्रीमति र एकछोरी समेत लगिसकेको थिए । एक छोरी र श्रीमति सहित लिस्वनमा बस्दै आएका जिसीकी अर्की छोरी भने नेपालमै रहेको बुझिएको छ । सामान्य आर्थिक अवस्थाका जिसीका ३ भाई मध्ये मृतक हरि बहादुर जिसी जेठा र घाईते ओम जिसी कान्छा हुन ।
मृतक जिसीको हत्याराको पहिचान भएपनि उनि अहिलेसम्म फरार रहेकाले पोर्चुगल प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ । घटनालगत्तै खबर पाएको प्रहरीले स्थानीय प्रशासन सँगै नेपाली समुदायसँगको सहकार्यमा फरार सापकोटालाई खोजी गरि प्रशासनसमक्ष बुझाउन आग्रह गरेको छ । हत्याराकाे कुनै कागजपत्र छैन् ।
मृतक जिसीको शवलाई पोष्टमास्टर्मपछि त्यहाँको प्रशासनले मृतकको परिवार र नेपाली समुदायलाई जिम्मा लगाउने छ ।
ओम अस्पतालको घटना छानविन गर्न समिति गठन
One thought on “यसरी भयो पर्वतका जिसीको पोर्चुगलमा हत्या”
पोर्चुगलमा एक नेपालीकाे नेपालीले छुरा प्रहार गरि हत्या | स्वीडेन खबर
[…] Source: online tvannapurna.com […]